Ahoana ny fiatrehan'ny China Southern Airlines ny oram-baratra COVID-19?
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » China Travel News » Ahoana ny fiatrehan'ny China Southern Airlines ny oram-baratra COVID-19?
China Southern Airlines miatrika ny COVID-19
Ny tonian-dahatsoratry ny zotram-piaramanidina ambony ho an'ny herinandron'ny sidina, Adrian Scofield, dia nanana ny tombony manokana hiresaka amin'ny filoha lefitra zokiny ho an'ny fifandraisan'ny orinasa iraisam-pirenena sy ny orinasa, Guoxiang Wu.
Ny VP Airline Sr. dia nilaza fa azo antoka ny dia an-trano any Sina, ary nitombo haingana be ny fangatahana.
Ho an'ny tamba-jotra iraisam-pirenena, noho ny fameperana ataon'ny governemanta, dia mbola ambany dia ambany ny fahaizan'ny zotram-piaramanidina any Sina amin'ny dia iraisam-pirenena.
Ny orinasam-pitaterana an'habakabaka dia mila mamerina manamboatra ny fiaramanidiny, ao anatin'izany ny fiverenan'ny fiaramanidina lava taloha, manapaka ny baiko sasany amin'ny fiaramanidina vaovao, ary manangana ny rafitra ara-bola na fifandraisana.
Niresaka momba ny fomba nanarahan'ny China South Airlines sy ny indostrian'ny seranam-piaramanidina midadasika kokoa amin'ny krizy corvavie COVID-19 izy roa lahy ireto.
Vakio hatrany - na mipetraha ary mihaino - ity CAPA - Ivotoerana fiaramanidina hetsika.
Amin'ny ankapobeny, afaka manomboka amin'ny firesahana ny amin'ny fomba fividianan'ny tsenanao an-trano amin'izao fotoana izao. Ho an'i Shina, efa tafarina tanteraka ve ny fahaiza-manao ao an-trano sy ny fitakiana, sa nisy fiantraikany teo amin'izany ny onja COVID?
Raha ny fahitako azy, ary indrindra hatramin'ny fiandohan'ity taona ity, heveriko fa tafarina tanteraka ny vola ao an-trano. Araka ny efa fantatrareo, noho ny asa lehibe nataon'ny governemanta tamin'ny fisorohana ny valanaretina, ny fifehezana ny areti-mandringana, heveriko fa anatiny fitsangatsanganana any Sina dia tena azo antoka. Vao tamin'ny volana Janoary ka hatramin'ny Febroary, nandritra ny vanim-potoana fara tampony, ny vanim-potoana fara tampon'ny fetin'ny lohataona ho an'i Chine, satria manentana ny olona hijanona ao an-trano mandritra ny fialantsasatra ny governemanta, dia kely ny fihenan'ny vanim-potoana io. Saingy taorian'ny fetin'ny lohataona dia nitombo haingana be ny fangatahana. Heveriko fa tamin'ny volana lasa, hatramin'ny volana martsa, ny fangatahana ao an-trano dia tafarina ara-potoana tanteraka.
Marina. Tena tsara. Ary heveriko fa mihoatra ny haavo COVID mialoha indray ny fahafaha-manaonao izao, sa tsy izany?